I-Semalt Expert: Wena, Ewe, Wena! Ngaba Uyazi I-Spam Referrer Spam?
Ukudluliselwa komoya okanye ugaxekile wokuthunyelwa kwintengiso yindlela yokukhohlisa ebonisa kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Nangona kunjalo, xa uqwalasela ngokukhawuleza ukuba zivela phi, ukubona ukuba zivela kwiwebhusayithi yokuthumela kwaye zandisa izinga lakho lokunciphisa ngokubanzi. Okwangoku, kukho ezimbini iindidi eziphambili zendawo yokudluliselwa kwezinto ezichaphazela idatha ye-Google Analytics. Okokuqala, kukho i-spam bots kunye ne-crawlers ezalathisa amaphepha akho ewebhu kwaye azihoxise iifayile ze-robots - entsorgen obfelden.txt. Uhlobo lwesibini luyiDarodar, enokuthi ichongwe njengeprogram yokuvelisa izithuthi. U-Ryan Johnson, u-10 (Semalt) uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uchaza ukuba umcimbi oyintloko kukuba umoya wokudlulisa i-spam uvela kwiindawo ezininzi, ezininzi zazo ziyimpikiswano yabantu abadala kwaye zibetha kwiiwebhusayithi ngekota.
Umahluko phakathi kwe-spam bots kunye neentshukumo zomoya ziyimpawu zendlela. I-spam yokuthumela i-spam ithumela i-traffic ukusuka kummandla omtsha kunye ongaziwa, kodwa akwenzeki ukutyelela iiwebhusayithi zakho. Kunoko, bashiya iindlela zedijithali ezichaphazela i-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye ukwandisa izinga lakho lokunciphisa. Zijolise ekulandeleni iikhowudi zeGoogle Analytics, kwaye unokubavimba ngokudala izihlungi kwi-akhawunti yakho. Ngaloo ndlela, uya kukwazi ukumisa ukuthungelwa koxinzelelo lwe-spam ekubhubhiseni idatha yakho ye-analytics.
Ingaba i-spam yokuhambisa i-spam ithintela i-SEO yam okanye iwebhusayithi?
Kukhuselekile ukukhankanya ukuba i-spam yokudlulisa i-spam ayikuchaphazeli i-SEO okanye iwebhusayithi yakho. Njengoko sele sele sichazile ukuba abayikuvakashela iwebhusayithi yakho kodwa kuboniswe kwiindawo ezibhekise phambili kwiData ye-Google Analytics..Nangona kunjalo, oko kukuchaphazela iingxelo zakho zeenkcukacha kunye neengxelo. Ugaxekile womoya othungelayo uhlahlela isayithi lakho yonke imini kwaye ubonisa ukufikelela kwiwaka lamawaka ngamahora angama-24.
I-spam yokudlulisela i-spam yenza izinto ezilandelayo kwisiza sakho:
Iyakwandisa kakhulu inqanaba lokuhlawula amanqaku akho ewebhu.
Inokunciphisa inani leendwendwe kwiblogi okanye kwindawo yakho.
Idibanisa idatha yokudlulisa kwaye yenza kube nzima kuwe ukuba ubone ukuba i-traffic iphezulu okanye ayikho.
Ithintela ukuguqulwa kweNjongo kunye nedatha yendawo, ukuthumela ukutyelela ezininzi kwiRashiya.
Ngaba abagaxekile abathumelayo bathumela njani idatha kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics?
2. Bakha i-automated bots ukutsalathisa iwebhusayithi yakho, ukukhupha abathumeli kunye nokubonisa ukutyelela okuninzi.
3. Benza i-bots ekhethekileyo ukuba ithumele idatha ngqo kwi-Google Analytics kwaye ingabandakanyi amasayithi ekudluliselwa kwangempela.
Indlela ebhetele yokukhusela i-spam yokudlulisela i-spam ngokudala izihlungi okanye ukuhlela ifayile yakho .htaccess. Unokwenza izihlunu ezininzi njengoko ufuna ukukhusela amahlumela asolisayo ekubhubhiseni idatha yakho ye-Google Analytics.